OTK-J3 Bafang Motor 250W Electrice Cargo Trike for Family, Shiinaha OTK-J3 Bafang Motor 250W Electrice Cargo Trike ee Soosaarayaasha Qoyska, Shirkado, Warshad - Farxad Gadiid (Changzhou) Ebike Co., LTD
OTK-J3 Bafang Motor 250W Korantada Cargo Trike ee Qoyska
Mashiinka: 36V-250W Batariga: 36V 12.8AH Bandhiga: LCD
Xawaaraha Heerka: 25km / h Nal: Laydhka
Gawaarida F: 20 ``
Ragga: 26 ``
OTKARGO J3 xamuul xamuul koronto oo loogu talagalay waalidiinta firfircoon. Baaskiilada xamuulka waxay ku habboon tahay ku dhowaad dhammaan wadaha iyadoo ay ugu wacan tahay qaab hoose oo tallaabo-tallaabo loo maro oo leh stem la hagaajin karo iyo kursiga kursigiisa Iyada oo leh batari 36V lithium iyo 250W BAFANG motor motor, OTKARGO J3 ayaa diyaar u ah safarka qoyska ee dheer.
Qoysas aad u tiro badan ayaa raadinaya habab gaadiid kaarboon oo hooseeya, OTKARGO waa xulasho fiican. OTKARGO J3 wuxuu leeyahay dhamaan howlaha gaariga, caruurtaada u kaxee beerta nasashada, ama eygaaga u dhaadhic xeebta. Meesha ugu weyn ee lagu keydiyona waxay hanan kartaa dhammaan cuntooyinkaaga toddobaadlaha ah.
Thanks to nidaamka caawinta baydalka iyo xawaaraha xawaaraha 7, wax dhib ah kuma lahan inaad fuusho xitaa meelaha ugu dhaadheer ee magaaladaada.
Iyada oo leh meel aad u fara badan oo lagu keydiyo, suunka ilaalinta, fadhiga raaxada leh ee carruurta iyo roogga roobka, OTKARGO J3 ayaa ku habboon dhammaan baahiyaha gaadiidka qoyskaaga.
Daboolka roobka Barkin & rooga Iftiinka hore / gadaal Daboolka Baaskiilka
Max.hadal 25 km / h (EU) motor BAFANG 250W Length 2270mm
Gudbinta 7 xawaare xawaare Display LCD width 870mm
jir Steel Battery 36V 12.8AH Dhererka 1170mm
Nalalka Biriigga qalabka makaanika